भारतमा भाजपा, नेपालमाा राजपा । अनुकरणको पनि हद हुन्छ, हदै नाघेर ६ मधेसका पार्टी मिलेर राजपा गठन गरेका हुन् । नाम राष्ट्रिय जनता पार्टी, यसमा राष्ट्रियता कति छ, यसको नापनक्सा यतिबेला पर्साको छपकैयामा ५० बिघा जमिन भारतले हड्प्यो, तर यो राजपाले मुख खोलेन, यसैबाट भएको छ ।
अति गम्भीर सवाल राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले उठाएका छन् । उनले भारतबिना नेपालले श्वास पनि फेर्न सक्दैन भनेका छन् । भारतीय मिडियालाई दिएको अन्तर्वातामा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा धनुषा ३ बाट निर्वार्िचत सांसद् राजेन्द्र महतोले भारतबिना नेपालले शस पनि फेर्न नसक्ने दाबी गरेका हुन् ।
यसबाट प्रश्न उठ्छ– राजेन्द्र महतोलाई किन र कसरी चुनाव जिताइयो, उनले अहिले नै भारतको त्यो ऋण चुकाउनतिर लागिसकेको देखियो ।
नेपालका नेताले भारतको तरफदारी गर्ने कि नेपालको ? यो विषय बढी गम्भीर छ । नेपालको स्वाधीनतामा आँच आउनेगरी बोल्ने अधिकार कुनै पनि नेतालाई छैन । नेपालको नेताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि यसरी प्रश्न गर्ने ? त्यो पनि सपथग्रहणसमेत नगरेको सांसदले ? यो कुरो मधेसका नेपालीलाई पाच्य छैन, अरुलाई कसरी हुन्छ ? तर पनि राजपाका नेताहरु मौन छन् ।
महन्थ ठाकुर जसले सम्धिलाई गभर्नर बनाए, सम्धिनीलाई समानुपातिक सांसद बनाउँदैछन्, उनी त त्यसै पनि परिवारवादी हुन् । उनको नेपालवादमा पनि ठूलो शंका छ । उनले पनि भारतीय अखबारमा नेपालको मधेसमा बहुल राष्ट्रवाद र मधेस प्रदेशको विषयमा कुरा उठाउँदै एक मधेस नभए एक नेपाल पनि रहन्न भनेर काम गरिरहेका छन् । यस्ता नेतालाई च्याप्न अरु राजनीतिक दलहरु दौडादौड गरिरहेका छन् ? यो राजपा यतिबेला कांग्रेससँग लपक्कै छ ।
राजेन्द्र महताको यही अभिव्यक्तिलाई भारतीय मिडियाले प्राथमकिताका साथ छापेका छन् । गोरखपुर न्युजले ‘भारतके बिना नेपालका सांस लेना भी मुस्किल’ शिर्षकमा समाचार छापेको छ । जनताको लागी राजनीति गर्ने भन्दै आएका महतोले दिएको यस्तो अभिब्यक्तिले सामाजिक सञ्जाललाई समेत आन्दोलित पारेको छ । तर कुनै पार्टीहरुले आपत्ति प्रकट नगर्नु आश्चर्य छ ।